အားလုံး သိထားသင့်သည် မြေအဆင့်အတန်း သို့မဟုတ် မြေအမျိုးအစားများ - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
အားလုံး သိထားသင့်သည် မြေအဆင့်အတန်း သို့မဟုတ် မြေအမျိုးအစားများ
26 Nov 2019 1:37 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
1806 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ကျွန်မအစ်ကိုအရင်း၏ သားဖြစ်သူကိုအောင်မျိုးသွင်သည် ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း အစိုးရဝန်ထမ်းလည်းမလုပ်ချင်၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုလည်းမနှစ်သက်သဖြင့် သူ ဝါသနာပါရာ အငှါးကားတက္ကစီတစ်စီးအား ဝယ်ပြီးလျှင် ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်လုပ်ကိုင်နေပြီး ကြုံလျှင်ကြံသလို အိမ်ခြံမြေပွဲစားလည်း လုပ်ပါသည်။ ကျွန်မအနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပဲခူးတိုင်းမှအမှုအတွက် ပဲခူးမြို့သို့ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီတိုင်းမှ အမှုအတွက် ပုသိမ်မြို့ ၊ ဟင်္သာတမြို့သို့ဖြစ်စေ သွားရသည့်အခါမှာ သူ့ကားအား ငှါးကာ သွားခဲ့ရပါသည်။
သွားကြသည့်အခါတိုင်းတွင်လည်း သူသိလိုသည့် အိမ်၊ ခြံ ၊ မြေ ကိစ္စများကို မေးမြန်းလေ့ရှိပြီး မှတ်သားထားတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်မက ပြောပြပြီး အချိန်မလောက်ငှ၍ အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့လျှင်လည်း၊ စိတ်ရှည်စွာ စောင့်စားမှတ်သားပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ဆုံသည့်အခါ ထပ်မံ၍ ဇာတ်ကြောင်းကို ဆက်ခိုင်းပြီး မေးမြန်းမှတ်သားတတ်ပါသည်။
ယခုလည်း ပဲခူးတိုင်း လက်ပံတန်းမြို့သို့ အမှုကိစ္စအတွက် ကျွန်မ၏ တပည့်မလေး အထက်တန်းရှေ့နေ မသိဂီအေး ကို ခေါ်ပြီး နေ့ချင်းပြန်ခရီးထွက်ခဲ့ရာ ထုံးစံအတိုင်း တူတော်မောင် ကိုအောင်မျိုးသွင် က လိုက်ပို့ပြီး ထုံးစံအတိုင်း မေးမြန်းပြန်ပါသည်။
တူတော်မောင်က “ အန်တီသင်းရယ် ၊ ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်သိချင်တာက ၊ မြေနဲ့ပတ်သက်တာကို လူများတွေပြောတာကြားကြားနေရပြီး မရှင်လင်းဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ ၊ မြေအမျိုးအစားက တော်တော်လေးကို ခွဲခြားထားတယ်လို့ သိနေကြားနေရလို့ပါ ခင်ဗျာ အဲဒါ အန်တီ သင်း သိသလောက်သာ ပြောပြသွားပါ ၊ ကျွန်တော် ကားမောင်းရင် မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ် ” ဟု ပြောသဖြင့် ကျွန်မကလည်း “ အေး ကောင်းပြီး၊ မင်းလည်း ကားမောင်းရင်း နားထောင်တော့ အိပ်မငိုက်တော့ဘူးပေါ့၊ အန်တီလည်း စာပြန်နွှေးသလို ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ် ” ဟု ပြောကာ ကျွန်မလည်း ပါလာသည့် မှတ်စုများကို ကြည့်ရင် ရှင်းလင်းပြောပြပါသည်။
“ မြေသီးသန့်ဖြစ်စေ ၊ အိမ်နှင့်မြေ တွဲလျက်ဖြစ်စေ ၊ ပတ်သက်ရင် အခုပြောမယ့် မြေအမျိုးအစားတွေကို သိထားရမယ် ”
“ အဲဒါတွေကတော့ လယ်မြေ ၊ လယ်ယာမြေ ၊ လယ်ယာဥယျာဉ်မြေ ၊ မြေပိုင်မြေ (ဘိုးဘွားမြေ ) ၊ ဂရန်မြေ ၊ ချထားမြေ (ပါမစ်မြေ) ၊ စကွာတာမြေ၊ စားကျက်မြေ ၊ ကျူးကျော်မြေ ၊ သာသနာပိုင်မြေ စတာတွေ ဖြစ်တယ် ”
“ တစ်ခုချင်း ရှင်းပြရရင် လယ်မြေဆိုတာက ဆန်စပါးတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အဓ်ိကထားပြီး စိုက်ပျိုးတဲ့မြေလို့ မှတ်ထားပါ ”
“ နောက်ပြီး စိုက်လို့ရတဲ့ မြေအားလုံးကိုတော့ လယ်မြေလို့သာ သတ်မှတ်ထားပါတယ် ”
“ လယ်ယာဥယျာဉ်မြေဆိုတာက လယ်ယာဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန် အတွက်သာ အသုံးပြုခွင့်ရတယ်။ ရောင်းခြင်း၊ ပေါင်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်း ခွဲစိတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ ”
“ ၁၉၅၃ ခုနှစ် ၊ လယ်မြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ)အရ လယ်မြေဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်က အလိုရှိသည့်အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်သည့် လယ်ယာလုပ်ကိုင်နိုင်သော မြေရိုင်းများနှင့် လယ်ယာကိုင်းကျွန်း ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးမှု သို့တည်မဟုတ် လယ်ယာကိုင်းကျွန်းဖြင့် အသက်မွေးမှု ကိစ္စများအတွက်ဖြစ်စေ ယင်းသို့ စိုက်ပျိုးမှုနဲ့ အသက်မွေးမှု၏ အထောက်အပံ့ဖြစ်သော အမှုကိစ္စများအတွက်ဖြစ်စေ။ လက်ရှိထားသည့် သို့တည်မဟုတ် သာမန်လုပ်ကိုင်သည့် သို့တည်မဟုတ် အငှါးချထားပြီးသည့်မြေကို ဆိုလိုသည်. ထို့ပြင်မြေပေါ်ရှိ လူနေအိမ်များနှင့် အခြားအဆောက်အအုံများ ပါဝင်သည်။ ”
“ သို့ရာတွင် မြို့ရွာတွင်တည်ရှိသော လူနေအိမ်ရာအဖြစ် လက်ရှိထားသည့် မြေမပါဝင်ချေ ” ဆိုပြီး ပုဒ်မ ၃(ခ)မှာ ပြဌာန်းထားပြီး
“အထက်ပါ ပုဒ်မ ၃(ခ) အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တွင် မပါဝင် ၊ အကျုံးမဝင် မှသာ၊ လူနေရပ်ကွက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်”
“ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ လယ်ယာမြေဥပဒေ ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၁၁)အရ၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဖျက်သိမ်းပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေကို ပြဌာန်းပါတယ် ” ၊ “ ယင်းဥပဒေအရ အပိုဒ် ၃(က) (ခ)တွင် “ လယ်ယာမြေ” ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သတ်မှတ်ထားပြီး ယခင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံ ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေတွင် လယ်ယာမြေမှ လူနေရပ်ကွက်အဖြစ် မြို့မြေစာရင်းဝင် သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော ပုဒ်မ မှာ လန-၃၉ (လယ်ယာမြေဥပဒေ ၊ ပုဒ်မ ၃၉) ဖြစ်ပါတယ်။
“ ယခု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ လယ်ယာမြေ ဥပဒေအရ၊ လယ်ယာမြေအား၊ အခြားနည်းသုံးခွင့်ပေးပြီး၊ လူနေမြေ (မြို့မြေ)သို့ သတ်မှတ်နိုင်သောပုဒ်မ လ/ယ ၃၀ (က)(ခ)(လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၀) ဖြစ်ပါတယ် ” “ အစိုးရမြေဖြစ်တဲ့အတွက် သင်္ကေတကို A နှင့် ပြပါတယ်၊ နောက်ပြီး မြေပုံကို ခရမ်းရောင်းနှင့် ဆွဲပါတယ်၊ ရွာမြေကိုတော့ လိမ္မော်ရောင်နှင့်ဆွဲပြီး၊ သာသနာပိုင်မြေဆိုရင် အစိမ်းရောင်းနှင့် မြေပုံကို ဆွဲပါတယ် ”
“ မြေပိုင်မြေ (ဘိုးဘွားပိုင်မြေ)ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံအားနယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် သိမ်းပိုက် စဉ်က မြို့ကွက်များကို ပြင်ဆင်ချဲ့ထွင်းပြီး ပြည်သူများအား ရောင်းချခဲ့စဉ်က ဝယ်ယူထားတဲ့ မြေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လယ်ယာမြေ ဥပဒေအရ လယ်ယာဥယျာဉ်ခြံမြေမှ ပြောင်းလဲလာနိုင်သောမြေလည်း ပါ ပါတယ်၊ အဆိုပါ မြေကို ရောင်း ၊ ပေါင် ၊ လွှဲပြောင်းခွဲစိတ်နိုင်ပါတယ် ” “ ဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်တဲ့အတွက် သင်္ကေတကို B နဲ့ ပြပြီး မြေပုံကို အပြာနဲ့ ဆွဲထားပါတယ် ”
“ ဂရန်မြေ (မြေငှားစာချုပ်မြေ )ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်က အစိုးရထံမှ မြေ မဝယ်ယူနိုင်သောသူများအား မြေငှါးခသတ်မှတ်၍ အငှါးချထားသောမြေ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒါ့အပြင် ချထားမြေ ၊ စကွာတာမြေ ၊ ရွာမြေစသည်တို့မှ ပြောင်းလဲလာနိုင်သော မြေလည်းဖြစ်ပါတယ် ၊ အဆိုပါမြေအား ရောင်းပေါင် ၊ လွှဲပြောင်း ၊ ခွဲစိတ်နိုင်ပါတယ် ” ဂရန်မြေဖြစ်တဲံအတွက် သင်္ကေတကို L နှင့် ပြပြီး မြေပုံကို အနီရောင်နဲ့ ဆွဲထားပါတယ် ”
“ ချထားမြေ (ပါမစ်မြေ) ဆိုတာက မြေငှါးစာချုပ်မရှိသော်လည်းနိုင်ငံတော်မှ ချထားသော မြေဖြစ်ပါတယ် ၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မြေငှါးစာချုပ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိပါတယ် ၊ ပါမစ်ပါ စည်းကမ်းချက်အရဆိုရင် ရောင်း၊ ပေါင် ၊ လွှဲပြောင်းခွင့် မရှိပါ ”
“စကွာတာမြေဆိုတာက အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်က မြေငှါးခ မပေးနိုင်၍ ဂရန် မြေမရသူများအား မပြောပလောက်သော မြေငှါးခထမ်းဆောင်စေ၍ နေထိုင်ခွင့်ပေးထားသော မြေ ဖြစ်ပါတယ်၊မြေပေါ်မှ ဆက်လက်နေထိုင်ပြီး မြေခကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေသူများ ၊ ၄င်း မြေ အငှါးချသူများသည် ဂရန်မြေအဖြစ်သို့ လျှောက်ထားနိုင်တယ် ” “ ဂရန် ကျပြီးမှသာ ရောင်း၊ ပေါင်၊ လွှဲပြောင်းနိုင်တယ်”
“ စားကျက်မြေဆိုတာက ဒေသတွင်းရှိ ကျွဲ ၊ နွား၊ သိုး ၊ ဆိတ်များအတွက် စားကျက်ချရာနေရာအဖြစ် မြေနှင့် အခွန်ဥပဒေများက သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျူးကျော်စိုက်ပျိုးလျှင်လည်းကောင်း ။ အခြားနည်း အသုံးပြုလျှင်လည်းကောင်း ၊ အရေးယူနိုင်သည်ဟု ပြဌာန်းထားပါတယ် ” “ သို့သော် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ လယ်ယာမြေ ဥပဒေတွင် ပုံစံ (၇) ရရှိနိုင်သူမှာ လက်ရှိ လက်ငုတ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်ရမည် ဟု ပြဌာန်းထားသဖြင့် မြေပိုင်အခွင့်အရေး ဂရန် ရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရှိပါတယ် ”
“ ကျုးကျော်မြေ (ကျူးဂရန်) ဆိုတာက ၊ မြေငှါးစာချုပ်လည်းမရှိ ၊ သက်ဆိုင်ရာမှလည်း ချပေးခြင်းမရှိ ၊ အသုံးမပြုသည့် အစိုးရမြေ (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကမြေပေါ်တွင် ကျုးကျော်ဆောက်လုပ်နေထိုင်သောမြေများဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်မှ လိုအပ်ပါက ဖယ်ရှားခရမည်ဖြစ်ပြီး မလိုအပ်ပါက ကျုးဂရန် သတ်မှတ်ကာ မြေငှါးခ ထမ်းဆောင်စေပါတယ်၊ အဆိုပါ မြေကွက်အား ရောင်း ၊ ပေါင် ၊ လွှဲပြောင်း ခွဲစိတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ ”
“ သာသနာ့ပိုင်မြေဆိုတာက ဝတ္တကမြေ ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ဗလီ ၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း စသဖြင့် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမှု ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်ဆက်စပ်မြေကို ခေါ်ပါတယ် ”
“ ကဲ တူတော်မောင်ရေ ၊ ဒီလောက်ဆိုရင် ပြည့်စုံလုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် ၊ အကယ်၍ အန်တီမသိဘူး၊ မကြုံဘူးသေးတဲ့ မြေအမျိုးအစား ထပ်တွေ့ခဲ့ရင်လည်း ပြောပြပါ ၊ တို့တစ်တွေ စုံးစမ်းလေ့လာကြရမှာပေါ့ကွာ ” ဟု ပြောရင် ကျွန်မလည်း ပင်ပန်းသွားသဖြင့် အနားယူကာ ခေတ္တမှေးစက်လိုက်ပါတော့သည်။
Credit: ကြာညိုသင်း (ဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ)
ကြှနျမအဈကိုအရငျး၏ သားဖွဈသူကိုအောငျမြိုးသှငျသညျ ဘှဲ့ရတဈယောကျဖွဈသျောလညျး အစိုးရဝနျထမျးလညျးမလုပျခငျြ၊ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးအလုပျကိုလညျးမနှဈသကျသဖွငျ့ သူ ဝါသနာပါရာ အငှါးကားတက်ကစီတဈစီးအား ဝယျပွီးလြှငျ ကိုယျတိုငျ မောငျးနှငျလုပျကိုငျနပွေီး ကွုံလြှငျကွံသလို အိမျခွံမွပှေဲစားလညျး လုပျပါသညျ။ ကြှနျမအနနေဲ့ တဈခါတဈရံတှငျ ပဲခူးတိုငျးမှအမှုအတှကျ ပဲခူးမွို့သို့ဖွဈစေ၊ ဧရာဝတီတိုငျးမှ အမှုအတှကျ ပုသိမျမွို့ ၊ ဟင်ျသာတမွို့သို့ဖွဈစေ သှားရသညျ့အခါမှာ သူ့ကားအား ငှါးကာ သှားခဲ့ရပါသညျ။
သှားကွသညျ့အခါတိုငျးတှငျလညျး သူသိလိုသညျ့ အိမျ၊ ခွံ ၊ မွေ ကိစ်စမြားကို မေးမွနျးလရှေိ့ပွီး မှတျသားထားတတျပါသညျ။ တဈခါတဈရံမှာ ကြှနျမက ပွောပွပွီး အခြိနျမလောကျငှ၍ အဆုံးမသတျနိုငျခဲ့လြှငျလညျး၊ စိတျရှညျစှာ စောငျ့စားမှတျသားပွီး နောကျတဈကွိမျဆုံသညျ့အခါ ထပျမံ၍ ဇာတျကွောငျးကို ဆကျခိုငျးပွီး မေးမွနျးမှတျသားတတျပါသညျ။
ယခုလညျး ပဲခူးတိုငျး လကျပံတနျးမွို့သို့ အမှုကိစ်စအတှကျ ကြှနျမ၏ တပညျ့မလေး အထကျတနျးရှနေ့ေ မသိဂီအေး ကို ချေါပွီး နခေ့ငျြးပွနျခရီးထှကျခဲ့ရာ ထုံးစံအတိုငျး တူတျောမောငျ ကိုအောငျမြိုးသှငျ က လိုကျပို့ပွီး ထုံးစံအတိုငျး မေးမွနျးပွနျပါသညျ။
တူတျောမောငျက “ အနျတီသငျးရယျ ၊ ဒီတဈခါ ကြှနျတျောသိခငျြတာက ၊ မွနေဲ့ပတျသကျတာကို လူမြားတှပွေောတာကွားကွားနရေပွီး မရှငျလငျးဘူး ဖွဈနလေို့ပါ ၊ မွအေမြိုးအစားက တျောတျောလေးကို ခှဲခွားထားတယျလို့ သိနကွေားနရေလို့ပါ ခငျဗြာ အဲဒါ အနျတီ သငျး သိသလောကျသာ ပွောပွသှားပါ ၊ ကြှနျတျော ကားမောငျးရငျ မှတျထားလိုကျပါ့မယျ ” ဟု ပွောသဖွငျ့ ကြှနျမကလညျး “ အေး ကောငျးပွီး၊ မငျးလညျး ကားမောငျးရငျး နားထောငျတော့ အိပျမငိုကျတော့ဘူးပေါ့၊ အနျတီလညျး စာပွနျနှေးသလို ဖွဈသှားတာပေါ့ကှယျ ” ဟု ပွောကာ ကြှနျမလညျး ပါလာသညျ့ မှတျစုမြားကို ကွညျ့ရငျ ရှငျးလငျးပွောပွပါသညျ။
“ မွသေီးသနျ့ဖွဈစေ ၊ အိမျနှငျ့မွေ တှဲလကျြဖွဈစေ ၊ ပတျသကျရငျ အခုပွောမယျ့ မွအေမြိုးအစားတှကေို သိထားရမယျ ”
“ အဲဒါတှကေတော့ လယျမွေ ၊ လယျယာမွေ ၊ လယျယာဥယြာဉျမွေ ၊ မွပေိုငျမွေ (ဘိုးဘှားမွေ ) ၊ ဂရနျမွေ ၊ ခထြားမွေ (ပါမဈမွေ) ၊ စကှာတာမွေ၊ စားကကျြမွေ ၊ ကြူးကြျောမွေ ၊ သာသနာပိုငျမွေ စတာတှေ ဖွဈတယျ ”
“ တဈခုခငျြး ရှငျးပွရရငျ လယျမွဆေိုတာက ဆနျစပါးတဈမြိုးတညျးကိုသာ အဓိကထားပွီး စိုကျပြိုးတဲ့မွလေို့ မှတျထားပါ ”
“ နောကျပွီး စိုကျလို့ရတဲ့ မွအေားလုံးကိုတော့ လယျမွလေို့သာ သတျမှတျထားပါတယျ ”
“ လယျယာဥယြာဉျမွဆေိုတာက လယျယာဥယြာဉျ စိုကျပြိုးလုပျကိုငျရနျ အတှကျသာ အသုံးပွုခှငျ့ရတယျ။ ရောငျးခွငျး၊ ပေါငျခွငျး၊ လှဲပွောငျး ခှဲစိတျပိုငျခှငျ့မရှိပါ ”
“ ၁၉၅၃ ခုနှဈ ၊ လယျမွနေိုငျငံပိုငျပွုလုပျရေး အကျဥပဒပေုဒျမ ၃(ခ)အရ လယျမွဆေိုသညျမှာ နိုငျငံတျောက အလိုရှိသညျ့အတိုငျး သုံးစှဲနိုငျသညျ့ လယျယာလုပျကိုငျနိုငျသော မွရေိုငျးမြားနှငျ့ လယျယာကိုငျးကြှနျး ဥယြာဉျစိုကျပြိုးမှု သို့တညျမဟုတျ လယျယာကိုငျးကြှနျးဖွငျ့ အသကျမှေးမှု ကိစ်စမြားအတှကျဖွဈစေ ယငျးသို့ စိုကျပြိုးမှုနဲ့ အသကျမှေးမှု၏ အထောကျအပံ့ဖွဈသော အမှုကိစ်စမြားအတှကျဖွဈစေ။ လကျရှိထားသညျ့ သို့တညျမဟုတျ သာမနျလုပျကိုငျသညျ့ သို့တညျမဟုတျ အငှါးခထြားပွီးသညျ့မွကေို ဆိုလိုသညျ. ထို့ပွငျမွပေျေါရှိ လူနအေိမျမြားနှငျ့ အခွားအဆောကျအအုံမြား ပါဝငျသညျ။ ”
“ သို့ရာတှငျ မွို့ရှာတှငျတညျရှိသော လူနအေိမျရာအဖွဈ လကျရှိထားသညျ့ မွမေပါဝငျခြေ ” ဆိုပွီး ပုဒျမ ၃(ခ)မှာ ပွဌာနျးထားပွီး
“အထကျပါ ပုဒျမ ၃(ခ) အဓိပ်ပာယျသတျမှတျခကျြတှငျ မပါဝငျ ၊ အကြုံးမဝငျ မှသာ၊ လူနရေပျကှကျအဖွဈ သတျမှတျပါတယျ”
“ ၂၀၁၂ ခုနှဈ ၊ လယျယာမွဥေပဒေ ၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ဥပဒအေမှတျ (၁၁)အရ၊ ၁၉၅၃ ခုနှဈ၊ လယျယာမွနေိုငျငံပိုငျပွုလုပျရေးအကျဥပဒကေို ၂၀၁၂ ခုနှဈ မတျလ ၃၀ ရကျနမှေ့ာ ဖကျြသိမျးပွီး ၂၀၁၂ ခုနှဈ လယျယာမွဥေပဒကေို ပွဌာနျးပါတယျ ” ၊ “ ယငျးဥပဒအေရ အပိုဒျ ၃(က) (ခ)တှငျ “ လယျယာမွေ” ၏ အဓိပ်ပါယျကို သတျမှတျထားပွီး ယခငျ ၁၉၅၃ ခုနှဈ၊ လယျယာမွနေိုငျငံ ပွုလုပျရေးအကျဥပဒတှေငျ လယျယာမွမှေ လူနရေပျကှကျအဖွဈ မွို့မွစောရငျးဝငျ သတျမှတျပေးနိုငျသော ပုဒျမ မှာ လန-၃၉ (လယျယာမွဥေပဒေ ၊ ပုဒျမ ၃၉) ဖွဈပါတယျ။
“ ယခု ၂၀၁၂ ခုနှဈ ၊ လယျယာမွေ ဥပဒအေရ၊ လယျယာမွအေား၊ အခွားနညျးသုံးခှငျ့ပေးပွီး၊ လူနမွေေ (မွို့မွေ)သို့ သတျမှတျနိုငျသောပုဒျမ လ/ယ ၃၀ (က)(ခ)(လယျယာမွဥေပဒေ၊ ပုဒျမ ၃၀) ဖွဈပါတယျ ” “ အစိုးရမွဖွေဈတဲ့အတှကျ သင်ျကတေကို A နှငျ့ ပွပါတယျ၊ နောကျပွီး မွပေုံကို ခရမျးရောငျးနှငျ့ ဆှဲပါတယျ၊ ရှာမွကေိုတော့ လိမ်မျောရောငျနှငျ့ဆှဲပွီး၊ သာသနာပိုငျမွဆေိုရငျ အစိမျးရောငျးနှငျ့ မွပေုံကို ဆှဲပါတယျ ”
“ မွပေိုငျမွေ (ဘိုးဘှားပိုငျမွေ)ဆိုတာက မွနျမာနိုငျငံအားနယျခြဲ့ အင်ျဂလိပျ သိမျးပိုကျ စဉျက မွို့ကှကျမြားကို ပွငျဆငျခြဲ့ထှငျးပွီး ပွညျသူမြားအား ရောငျးခခြဲ့စဉျက ဝယျယူထားတဲ့ မွေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လယျယာမွေ ဥပဒအေရ လယျယာဥယြာဉျခွံမွမှေ ပွောငျးလဲလာနိုငျသောမွလေညျး ပါ ပါတယျ၊ အဆိုပါ မွကေို ရောငျး ၊ ပေါငျ ၊ လှဲပွောငျးခှဲစိတျနိုငျပါတယျ ” “ ဘိုးဘှားပိုငျမွဖွေဈတဲ့အတှကျ သင်ျကတေကို B နဲ့ ပွပွီး မွပေုံကို အပွာနဲ့ ဆှဲထားပါတယျ ”
“ ဂရနျမွေ (မွငှေားစာခြုပျမွေ )ဆိုတာက အင်ျဂလိပျအစိုးရလကျထကျက အစိုးရထံမှ မွေ မဝယျယူနိုငျသောသူမြားအား မွငှေါးခသတျမှတျ၍ အငှါးခထြားသောမွေ ဖွဈပါတယျ ၊ ဒါ့အပွငျ ခထြားမွေ ၊ စကှာတာမွေ ၊ ရှာမွစေသညျတို့မှ ပွောငျးလဲလာနိုငျသော မွလေညျးဖွဈပါတယျ ၊ အဆိုပါမွအေား ရောငျးပေါငျ ၊ လှဲပွောငျး ၊ ခှဲစိတျနိုငျပါတယျ ” ဂရနျမွဖွေဈတဲံအတှကျ သင်ျကတေကို L နှငျ့ ပွပွီး မွပေုံကို အနီရောငျနဲ့ ဆှဲထားပါတယျ ”
“ ခထြားမွေ (ပါမဈမွေ) ဆိုတာက မွငှေါးစာခြုပျမရှိသျောလညျးနိုငျငံတျောမှ ခထြားသော မွဖွေဈပါတယျ ၊ တဈခြိနျခြိနျမှာ မွငှေါးစာခြုပျထုတျပေးနိုငျတဲ့ အလားအလာရှိပါတယျ ၊ ပါမဈပါ စညျးကမျးခကျြအရဆိုရငျ ရောငျး၊ ပေါငျ ၊ လှဲပွောငျးခှငျ့ မရှိပါ ”
“စကှာတာမွဆေိုတာက အင်ျဂလိပျအစိုးရလကျထကျက မွငှေါးခ မပေးနိုငျ၍ ဂရနျ မွမေရသူမြားအား မပွောပလောကျသော မွငှေါးခထမျးဆောငျစေ၍ နထေိုငျခှငျ့ပေးထားသော မွေ ဖွဈပါတယျ၊မွပေျေါမှ ဆကျလကျနထေိုငျပွီး မွခေကို ဆကျလကျထမျးဆောငျနသေူမြား ၊ ၎င်းငျး မွေ အငှါးခသြူမြားသညျ ဂရနျမွအေဖွဈသို့ လြှောကျထားနိုငျတယျ ” “ ဂရနျ ကပြွီးမှသာ ရောငျး၊ ပေါငျ၊ လှဲပွောငျးနိုငျတယျ”
“ စားကကျြမွဆေိုတာက ဒသေတှငျးရှိ ကြှဲ ၊ နှား၊ သိုး ၊ ဆိတျမြားအတှကျ စားကကျြခရြာနရောအဖွဈ မွနှေငျ့ အခှနျဥပဒမြေားက သတျမှတျခဲ့ပွီး ကြူးကြျောစိုကျပြိုးလြှငျလညျးကောငျး ။ အခွားနညျး အသုံးပွုလြှငျလညျးကောငျး ၊ အရေးယူနိုငျသညျဟု ပွဌာနျးထားပါတယျ ” “ သို့သျော ၂၀၁၂ ခုနှဈ ၊ လယျယာမွေ ဥပဒတှေငျ ပုံစံ (၇) ရရှိနိုငျသူမှာ လကျရှိ လကျငုတျစိုကျပြိုးလုပျကိုငျသူ ဖွဈရမညျ ဟု ပွဌာနျးထားသဖွငျ့ မွပေိုငျအခှငျ့အရေး ဂရနျ ရရှိနိုငျသညျ့ အခှငျ့အရေး ရှိပါတယျ ”
“ ကြုးကြျောမွေ (ကြူးဂရနျ) ဆိုတာက ၊ မွငှေါးစာခြုပျလညျးမရှိ ၊ သကျဆိုငျရာမှလညျး ခပြေးခွငျးမရှိ ၊ အသုံးမပွုသညျ့ အစိုးရမွေ (သို့မဟုတျ) ပုဂ်ဂလိကမွပေျေါတှငျ ကြုးကြျောဆောကျလုပျနထေိုငျသောမွမြေားဖွဈပွီး နိုငျငံတျောမှ လိုအပျပါက ဖယျရှားခရမညျဖွဈပွီး မလိုအပျပါက ကြုးဂရနျ သတျမှတျကာ မွငှေါးခ ထမျးဆောငျစပေါတယျ၊ အဆိုပါ မွကှေကျအား ရောငျး ၊ ပေါငျ ၊ လှဲပွောငျး ခှဲစိတျပိုငျခှငျ့မရှိပါ ”
“ သာသနာ့ပိုငျမွဆေိုတာက ဝတ်တကမွေ ၊ ခရဈယာနျဘုရားရှိခိုးကြောငျး၊ ဗလီ ၊ ဟိန်ဒူ ဘုရားကြောငျး စသဖွငျ့ ကိုးကှယျဝတျပွုမှု ဘာသာရေးနှငျ့ ပတျသကျဆကျစပျမွကေို ချေါပါတယျ ”
“ ကဲ တူတျောမောငျရေ ၊ ဒီလောကျဆိုရငျ ပွညျ့စုံလုံလောကျပွီလို့ ထငျပါတယျ ၊ အကယျ၍ အနျတီမသိဘူး၊ မကွုံဘူးသေးတဲ့ မွအေမြိုးအစား ထပျတှခေဲ့ရငျလညျး ပွောပွပါ ၊ တို့တဈတှေ စုံးစမျးလလေ့ာကွရမှာပေါ့ကှာ ” ဟု ပွောရငျ ကြှနျမလညျး ပငျပနျးသှားသဖွငျ့ အနားယူကာ ခတ်ေတမှေးစကျလိုကျပါတော့သညျ။
Credit: ကွာညိုသငျး (ဥပဒရေေးရာအတိုငျပငျခံရှနေ့ေ)
လယျယာမွေ ဝယျရောငျး လုပျကွရာမှာ မသိမဖွဈ လိုအပျတာ ခှငျ့ပွုမိနျ့ (ပုံစံ-၁၅) ပါ
" အထငျနဲ့အမွငျ " တကျတကျစငျလှဲ ပါမဈမွရေမှာဆိုတော့ ဝမျးသာစရာဘဲ
နစေ့ဉျသနျ့ရှငျးအောငျ မဖွဈမနလေုပျသငျ့သညျ့ အရာမြား
နိုငျငံခွားရောကျရှိနသေူ ဝယျယူသညျ့ မွနျမာနိုငျငံရှိမွအေား တရားဝငျဥပဒနှေငျ့အညီ မညျသို့ဝယျယူနိုငျမညျနညျး...
HLEGU Tsp., Ready to live, land + House+ Company Office Room including Electric and water (120x145) 1000 Lakh (discount First price of 1200...
နှစ်ထပ် လုံးချင်းအိမ် အငှါးလေး
For Rent Apartment On Waizayandar Road